AYA Joy ခရီးသွားအာမခံ
ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးသွားစဉ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော မတော်တဆမှု၊ ကိုယ်ခန္ဓာဒဏ်ရာ ရရှိမှု၊ မသန်စွမ်းမှုတို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ AYA Joy ခရီးသွားအာမခံသည် ခရီးစဉ်အတွင်း အဆင်မပြေမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ပြန်လည်ပေးပါသည်။
လျော်ကြေး အကျုံးမဝင်သော အချက်များ
အများဆုံး ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ကျပ်အထိ အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။
အများဆုံး ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ ပေးလျော်ပါသည်။ (အာမခံထားသူ၏ သတိမမူမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ပါးသူထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် ပေးလျော်ပါသည်)
ဆေးကုသမှု ဆေးရုံတက်ရောက်မှုနှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ
၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပေါ် မူတည်၍ ပေးလျော်ပါသည်။
နေ့စဥ်ဆေးကုသစရိတ် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ နှင့် ကျပ် ၃,၀၀၀,၀၀၀ အထိ
အကယ်၍ ခရီးဆောင်အိတ်ရောက်ရှိကြောင်း စာရင်းသွင်းချိန်မှ စတင်၍ သတ်မှတ်ထားသော နေရာသို့ ရောက်ရှိချိန်၌ ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက နောက်ကျမှု ၆ နာရီတိုင်းအတွက် ကျပ် ၅၀,၀၀၀
ပထမ ၆ နာရီတိတိ နောက်ကျမှုအတွက် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ နှင့် ထပ်မံနောက်ကျမှု ၆ နာရီတိုင်းအတွက် ကျပ် ၇၀,၀၀၀
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှု
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှု (အခြားပစ္စည်း အမျိုးအစားတစ်ခု၊ တစ်စုံစီပါဝင်သည့် ကဏ္ဍတစ်ခုစီ ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် အမြင့်ဆုံးပမာဏ ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀)
အသက် (၇၀) အောက် လူကြီးများမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ရရှိသူ (သို့) တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ
၁၀။ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ၊ မော်တော်ကားပြိုင်ပွဲ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ကျောက်တောင်တက်ခြင်း၊ တွင်းတူခြင်း၊ လေထဲခုန်ချခြင်း၊ လေထီးခုန်ခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ အမြင့်ခုန်ခြင်း၊ အမြင့်ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း နှင့် လေပူဖောင်းစီးခြင်းစသည့် အန္တရာယ်ရှိ အားကစားနည်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှုများ
၁၅။ နျူကလီးယားလောင်စာများ (သို့) ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဓာတ်ရောင်ခြည် (သို့) ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများ
သင်၏နေအိမ် သို့မဟုတ် အာမခံဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် စတင်မည့် နေရာမှ စတင်ထွက်ခွာသည့်အချိန်မှစ၍ (သတ်မှတ်ထားသည့် ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီထက် စော၍ဖြစ်စေ၊ ​ခရီးရောက်ရှိမည့်နေရာသို့ ၂၄ နာရီထက်နောက်ကျ၍ဖြစ်စေ အကာအကွယ် အကျုံးမဝင်ပါ။) သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်​ရောက်ရာနေရာသို့ ​ရောက်ရှိသည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ခရီးသွားအာမခံကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ခရီးစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ။
ခရီးသွားကာလ သို့မဟုတ် ဦးတည်ရာနေရာများကို ခရီးစဥ်မစတင်မီရက်မတိုင်ခင် ၂၄ နာရီ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
အဓိက လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်တဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ခရီးသွားအာမခံအကာအကွယ်သည် ပေါ်လစီမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်သည့် အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အကာအကွယ်မပေးပါ။ (ဥပမာ – ရှိရင်းစွဲ​ရောဂါလက္ခဏာများ၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း သတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးသုံးစွဲခြင်း၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုးများ) မှတ်ချက် – လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်သည့် အချက်များကို ပေါ်လစီတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
လျော်ကြေးတောင်းခံမည်ဆိုပါက ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းတွေ လိုအပ်မလဲ။
မတော်တဆ သေဆုံးမှု Claim Form ကို ခရီးမထွက်ခွာမီ download လုပ်ထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လျော်ကြေးတောင်းခံရန်လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်၊ ဆေးရုံမှငွေတောင်းခံလွှာနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာတင်သွင်း၍ လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ပါသည်။
တစ်ပါးသူထိခိုက်နစ်နာခြင်း မတော်တဆမှုပေါ်မူတည်ပါသည်။ လျော်ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံ / ရဲအစီရင်ခံစာ / ခန့်မှန်းချက် / ဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံလွှာ စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
သတိထားသင့်တဲ့ အဓိက အချက်အလက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ။
အာမခံထားသူ၏ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အာမခံဝယ်ယူမည်ဆိုပါက Proposal Form (အဆိုပြုလွှာ) တွင် မှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခံထားသူသည် မေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာနှင့် တိကျစွာ ဖြေပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းများအား မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုခြင်းမရှိပါက အာမခံပေါ်လစီအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လျော်ကြေးငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အာမခံပေါ်လစီဖျက်သိမ်းခြင်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အာမခံထားသူဘက်မှ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အန္တရာယ်ကို လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ အာမခံထားသူသည် အသက်အာမခံထားရှိခြင်း၊ Proposal Form ပါအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်းများ (သို့) အသက်အာမခံထားရှိသူသည် ခရီးသွားအာမခံထားမည်ဆိုပါက ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
When choosing AYA Joy Travel Insurance, it is helpful to remember that all plans-Express Plan, Eco Plan, Individual Plan and Family Plan. Compare them to find the coverage that is the best fit for your needs and financial situation.
Consideringaproblem withinatrip that may occur, AYA Joy Travel Insurance policy can come in handy to make the claim process smoother. Fast and reliable claims give youasense of calm to focus on your recovery.
Learn in seconds which types of insurance match you and your loved ones.